vienna | Otu Di na Nwunye
Mee 1, 2019 + Austria, Europe, Nhazi njem
Ot'u esi emefu ubochi izu ike di na Vienna
Nnukwu na isi obodo Austria, Vienna bụ ihe efu magburu onwe ya. N'ịbụ nke a maara dịka obodo egwú ma ọ bụ obodo nrọ, Vienna abụghị nanị n'ụlọ ndị egwu egwu dị ka Mozart ma ọ bụ Beethoven, kama ọ bụ ịma mma, ụlọ ọrụ ụwa, na ọdịbendị bara ọgaranya. Ọ bụrụ na Vienna nọ na ezumike gị ma nwee ngwụcha izu, echeghị ya! Ozugbo ị chọpụtara ... GỤKWUO
November 15, 2018 + ụlọ, Austria, Europe, Hotels, Nhazi njem
Ebee Ka I Nọrọ na Vienna
Ebee ka ị ga-anọ na Vienna? Ọ bụ ajụjụ mgbagwoju anya, dịka Vienna bụ obodo Europe nke nwere ọhụụ nke nwere ọtụtụ ihe ọ ga-eme. N'elu Osimiri Danube, Vienna kewara ya na 23 district - nke a maara Bezirke. A na-agụta ha maka okwu dị mfe, na gburugburu na-amalite na etiti Bezirke 1, ma na-arụ ọrụ n'èzí kasị elu nke na-arịgo elu karịa ọnụ ọgụgụ. Map - Vienna kacha mma ... GỤKWUO
November 7, 2017 + Arts & Music, Austria, Europe, History
Neue Wiener Schule: Schoenberg na Ụlọ Akwụkwọ Vienna nke abụọ
Vien, Austria bụ obodo e wuru na amamihe dị ọcha. Gburugburu akụkụ ọ bụla yiri ka bust, ihe oyiyi, ma ọ bụ ikekwe ụlọ ọrụ mmemme nwere aha ọzọ e dere n'okpuru, na akụkọ ọzọ a ga-anụ. Ọ bụ, n'ọtụtụ ụzọ, ụlọ kachasị na egwu egwu dị egwu, ma n'eziokwu, ọ bụrụ na ọ bụ ụdị egwú ọ bụla, ọ bụ n'egwú egwú. Tupu ịga ebe ọ bụla, anyị na-ahọrọ ịdọrọ ala ... GỤKWUO
Etu aga emefu Ubochi 3 na Macau
Onyinye 7 maka njem na-agakarị
Archives Họrọ net December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 Ka 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 Ka 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 Ka 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016